Kacaankii Madadaalada Hoyga Caanka ahaa - AndroBox
Kacaankii Madadaalada Madadaalada
Muxuu sameeyaa sanduuqa Android?
Sida magaceedaba ka muuqata, Android Box wuxuu ku saleysan yahay isla barnaamijyada Android ee laga helo taleefannada gacanta, laakiin waa loo jaangooyey si loogu shaqeeyo aaladaha TV-ga.
Sanduuqa Android wuxuu TV kasta ka dhigayaa inuu ka caqli badan yahay kan caqliga badan, waa sida isku darka taleefanka ugu fiican ee casriga ah ama kaniiniga ku jira isteeroydhiska oo leh shaashad weyn oo shaashad ah ama shaashadda borojektar iyo nooc kasta oo hago ah sida jiirka, kiiboodhka, jiirka hawada ee Gyro, qalabka ciyaarta, TV-ga caadiga ah. iwm si loo helo khibrada ugu fiican ee isticmaaleyaasha madadaalada mustaqbalka. Uma baahnid kumbuyuutar qaali ah ama Khaanadaha Ciyaaraha si aad u hesho madadaalada ugu fiican. Faa'iidada ugu weyn ee Sanduuqa Android waa ikhtiyaar lagu rakibo barnaamij kasta oo Google play ah iyo Kodi.
Kodi waxaad fursad u leedahay inaad ku daawato wax walba oo bilaash ah oo bilaa lacag ah sida barnaamijyada TV-yada, Filimada, TV-yada tooska ah, Durdurka, Youtube iwm.
Dukaanka Google Play waxaad ku dhejin kartaa wax Game Android ah oo waxaad ku dhejin kartaa telefishankaaga adoo isticmaalaya wixii tabtaro ciyaarta ah, keyboard ama jiir. Ama waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarka Miracast si aad u shaashadda u dhigto shaashaddaada oo aad u cayaarto ciyaar kasta oo kaaga timaadda taleefankaaga casriga weyn adigoo isticmaalaya taleefankaaga casriga ah sida xukuma.
Waxaad ku rakibi kartaa barnaamijyada IP Tv IP si aad u daawato TVga tooska ah, ama aad u isticmaasho Netflix
Sidoo kale bandhigyada TV-yada iyo filimada, Android TV wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ciyaaro ciyaaro, sida badan PlayStation TV iyo Amazon Fire TV. Android TV waxay ku tiirsanaan doontaa Google Play Store si ay u soo gudbiso waxyaabaha ay ka kooban tahay, laakiin baaristu sidoo kale waxay ku dagaali doontaa adeegyada qulqulka saddexaad sida Netflix markii ay habboon tahay.
Haddii aad heshid Netflix, Blinkbox ama Prime Instant Video ayaa lagu rakibay Android TV oo waxaad weydiisataa inuu raadsado filimo xiddig leh Cate Blanchett, Android TV waa inuu eegaa dhamaan kuwaas si loo arko waxa jira.
Caadi ahaan, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad daawan karto telefishanka caadiga ah, haddii taasi sabayn doontaada.
Sida Chromecast, Android TV sidoo kale way labanlaabtaa sidii durdur oo leh astaamaha 'Cast'. Marka adeegsadayaashu waxay ka heli karaan waxyaabaha mobiladooda moobiilka ah ama biraawsarka 'Chrome browser-ka' oo ay ugu gudbi karaan TV-ga Android, walwal ma qabaan.
Posted in Sanduuqa Android
Mouse Hawada 3 ee 1
3 fikradaha ahKacaankii Madadaalada Madadaalada"
Vince Dowden wuxuu leeyahay,
Wow taasi waxay ahayd wax aan caadi ahayn. Kaliya waxaan qoray faallo aad u dheer laakiin ka dib markaan dhagsiiyey soo gudbi faallooyinka ma muuqan. Grrrr… sifiican ugama qori karo intaas oo dhan markale. Iyadoo aan loo eegin, kaliya waxaan rabay inaan dhaho blog cajiib ah!
phukiengiare wuxuu leeyahay,
Badeecado waaweyn ayaa kaa soo baxay, ninyahow. Waan fahmay alaabtaada hada kahor waadna fiicantahay. Runtii waan jeclahay waxa aad halkan ku soo baratay, runtii waan jeclahay waxa aad sheegeyso iyo habka aad u leedahay. Waad ka dhigeysaa mid lagu farxo oo wali waad daryeeshaa inaad ka dhigto mid caqli gal ah. Ma sugi karo inaan waxbadan kaa aqriyo. Runtii tani waa websaydh weyn.
Taren wuxuu leeyahay,
Ku ciyaarista taleefan badan oo waajibaadka FPS ah mobilada waa caqabad.
NVIDIA SHIELD TV | Xidigaha Idaacadda Dhex-dhexaadin leh Isuduwaha Karta & Ciyaaraha
Mocute 054 bluuter gamepad Wireless game Handle Controller
Yoka TV KB2 PRO Dib u eegis Buuxda
Dhunkasho Malaysia on Mocute 054 bluuter gamepad
Candice 2020 on Mocute 054 bluuter gamepad
Singapore on Mocute 054 bluuter gamepad
Kasia on Mocute 054 bluuter gamepad
sina on Mocute 054 bluuter gamepad
Ku biir joornaal bilaash ah
Haaruun Mouse Hawada Androbox android Sanduuqa Android Flymouse Jiirka Duula xakameynta ciyaarta xakameynta ciyaarta Himedia Q10 Pro keyboard Sanduuqa Kodi Mi Box mouse Nvidia Shield NVIDIA SHIELD TV Xakamaynta fog taabashada suufka fog Xiaomi
Airmouse 4 1 fog T6 $21.11